အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် 2016 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမီဒီယာ & Entertainment ကမှာ "သိုလှောင်၏အနုပညာ" လေ့လာတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်
အိတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 6K သည် Mumford & Sons အတွက်ရှားပါးသောအကြောင်းအရာများကိုရိုက်ကူးသည်
Telestream သည် Diana Horowitz ကို USA အရှေ့ပိုင်းအရောင်းဌာန၌ခန့်အပ်ခဲ့သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » မီဒီယာ & Entertainment ကအတွက် 2016 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ Explorer "သိုလှောင်၏အနုပညာ 'ကိုတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်
မီဒီယာ & Entertainment ကအတွက် 2016 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ Explorer "သိုလှောင်၏အနုပညာ 'ကိုတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်
ဒသမနှစ်ပတ်လည်ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (CS 2016) ကို DoubleTree ဟိုတယ်အနောက်မှာကြာသပတေးနေ့ဇွန်လ 23, 2016 ကျင်းပလိမ့်မည် Los Angeles မြို့ Culver စီးတီး, CA. အတွက် ဤဖြစ်ရပ်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုပံ့ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူများထံမှနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအတူတကွဆောင်တတ်၏, နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအဆုံးအသုံးပြုသူများသည် "သိုလှောင်၏အနုပညာ '၏ညီလာခံဆောင်ပုဒ်စူးစမ်းလေ့လာမယ့်နေရာရရှိ။
"ဒီတစ်ရက်ညီလာခံနှင့်ပြပွဲအကြောင်းအရာများဖမ်းမိ, တည်းဖြတ်, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးဘို့ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံမည်သောစျေးသည်, အဆုံးသုံးစွဲသူများသုတေသီများနှင့်အမြော်အမြင်အတူတကွဆောင်တတ်၏," တွမ် Coughlin, Coughlin Associates မှနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီရပါမည်-တက်ရောက်ရန်ပွဲအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းလငျးအိမျကပေးတဲ့နေ့ကရှည်လျားတင်ပြချက်များအပြင်, ငါသည်လည်းမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုများအတွက်အဆင့်အတန်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအပေါ်တစ်ဦးတင်ပြချက်ပေးခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါကွန်ဖရသောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံး6အစည်းအဝေးများရပါလိမ့်မယ်။ လည်းလေးညီလာခံကာလအတွင်းပြောရမှာဆွေးနွေးပွဲနှင့်ညဦးယံ၌အများဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့ကမကထဧည့်ခံရှိလိမ့်မည်။
to-date, ကော်ပိုရိတ်စပွန်ဆာများနှင့်ပြသခဲ့သည် SGL, SPECTRA Logic, SwiftStack နှင့် Visual စနစ်များပါဝင်သည်။ မီဒီယာနှင့်အဖွဲ့စပွန်ဆာပေးသူများကိုလိုနီယ်ယူခြင်း, Coughlin Associates မှ, Drive ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါမဟာမိတ်အဖွဲ့, Entertainment ကသိုလှောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့, Flash ကိုမှတ်ဉာဏ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, HDDFA, ပင်မစာမျက်နှာကစားစရာ / AVSystems, M & E Tech မှ, Post ကို, ပါဝင်သည် ProductionHub.com, RDC, သုံးသပ်ရေး, SMPTE နှင့် SNIA ။
တင်ပြချက်များယခုမေလတွင် 2016, 1 သည်အထိ 2016 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံအဘို့အကျရကြောင်းလျက်ရှိသည်။ စပီကာ / ဟောပြောမှာဒီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရပ်ဘို့မိမိတို့တင်ပြချက်များတင်ပြနိုင်ပါတယ် www.creativestorage.org/2016SpeakersCall.htm။ အဆိုပါပဏာမညီလာခံအစီအစဉ်မှာကို web site ပေါ်တွင် posted ဖြစ်ပါတယ် www.creativestorage.org.
စပွန်ဆာပေးခြင်းနှင့်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုအဆိုပါ 2016 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကွန်ဖရ, web site ကိုပွဲနှင့်အခန်းအနားစပွန်ဆာအများအပြားအဆင့်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်စားပွဲတစ်ခု-ထိပ်တန်းပြပွဲ။ အဆိုပါစပွန်ဆာများနှင့်ပြပွဲအခွင့်အလမ်းများအပေါ်ပြန်ကြားရေးမှာရရှိနိုင်ပါ www.creativestorage.org/2016Exhibitors.htm.
ညီလာခံမှတ်ပုံတင်ယခုလည်းပွင့်လင်းသည်။ တက်ရောက် link ကို အသုံးပြု. မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်သည် www.creativestorage.org/2016Register.htm.
အဆိုပါကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (ထို Entertainment ကသိုလှောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အားဖြင့်ပေါ်တွင်တင်နေသည်www.entertainmentstorage.org) နှင့် Coughlin Associates (www.tomcoughlin.com).
အဆိုပါကွန်ဖရခေါ်ဆိုခ 408-202-5098 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်အပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် [အီးမေးလျ protected].
OMNIMAGO သည်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Xytech ၏ MediaPulse ကိုရွေးချယ်သည် - နိုဝင်ဘာလ 12, 2019
ဖန်တီးမှုသိုလှောင်မှုညီလာခံ 2016 သိုလှောင်ခြင်း	2016-03-18
နောက်တစ်ခု: မီဒီယာအတွက် 2016 ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှု End User စစ်တမ်း - လိုအပျစစ်တမ်းဖြေကြားသူများ